MASUUL KA TIRSAN WASAARADA HAWLAHA GUUD OO LA XIDHAY RUG POLICE KU TALA MAXAKAMDA GOBOLKA HARGAYSA | Toggaherer's Weblog
Agaasimaha guud ee wasaarada hawlaha iyo guriyeynta iyo agaasimaha waaxda dhulka iyo jaangoynta ee wasarada hawlaha guud Maxamed Maal Cali ayaa maanta qadar saacado ah ku xidhnaa rugta Police ka ee maxakamada Hargaysa markii in la xidho amar ku bixyey kuxigeenka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Yuusuf Caato.
Xadhiga masuuliyiintan ayaa ka dambeeyey ismaan dhaaf soo kala dhex galay wasaarada hawlaha guud iyo guriyeynta iyo xeerilaaliyaha gobolka oo salaysnayd dhul dan guud ah oo xeer ilaalintu ka dhisanaysay agagaarka xeer ilaalinta gobolka ee Hargaysa .
Kaasi oo agasimaha waxaada dhulka iyo jaangoynta ee wasaarada hawlaha guud uu is hor tagay dhisida dhulkaasi oo la sheegay in markii hore ay wasaaradah hawlaha guud siisay dhulakaas xeer ilaalinta qaranka .
Masuuliyiintan la xidhay oo markii dambe la siidayeey ayaa sheegay in ay xeer ilalintu bilawday dhismaha meel aan ahayn meeshii ay wasarada hawlaha guud u ogolaatay oo ah barxada xafiiskii hore maxakamda gobolka Hargaysa waxaana sheegeen in ay wasaradah hawlaha guud ay dhulka danta guud ah xukunto xeer ilaalintana la siiyo xafiiskooda dabadiisa .
Kuxigeenka xeer ilaaliyaha guud ayaa sheegay agaasimaha waaxdadhulka iy jaangoyntu uu is hor taagay dhul uu nasiiyey wasiirka wasaaradah hawlaha guud arintan ayaa la filayaa in ay ku dhex jirto dhul dheeri ah oo laga iibiyey dad shicib ah oo lagu dhex qarinayao dhulkan.
Warqabadka toga herer